【 အလှအပနှငျ့ ကနျြးမာရေး 】အသညျးခွောကျခွငျး အကွောငျး တစတေ့စောငျး | Opinion Leaders
အသညျးခွောကျတာကို ဆေးပညာ အချေါအဝျေါအရ Cirrhosis of liver လို့ချေါပါတယျ။ အသညျးခွောကျတာက ရုတျခညျြးဖွဈတာမြိုးမဟုတျဘဲ တဖွညျးဖွညျးခငျြး နှဈနဲ့ခြီ ဖွဈတာပါ။ အသညျးပုံမှနျဆဲလျတှေ နရောမှာ fibrous tissues လို့ချေါတဲ့ အမြှငျတှေ အစားထိုးလာကာ နောကျဆုံးမှာ အသညျးရဲ့ မူလဖှဲ့စညျးပုံ ပြောကျသှားပွီး nodules လို့ချေါတဲ့ အလုံးတှေ ဖွဈလာတာကို ချေါတာပါ။ ဒီအမြှငျတှကေ အသညျးဆဲလျတှကွေားက သှေးစီးဆငျးမှုကိုပါ ပိတျဆို့စလေို့ အသညျးဆီလာတဲ့ သှေးပွနျကွောအဖှဲ့အစညျးမှာ သှေးပေါငျတကျခွငျး (Portal Hypertension) ဆိုတဲ့ အခွအေနကေိုလညျး ဖွဈစပေါတယျ။ ဒါကတော့ အသညျးခွောကျတဲ့အခါ တှရေ့တဲ့ ဖွဈစဥျအကြဥျးပါ။
ဘယျအကွောငျးတှကေ အသညျးခွောကျခွငျးကို ဖွဈစသေလဲ?
(၂)အသညျးရောငျ အသားဝါ ဘီပိုး စီပိုးကွောငျ့ နာတာရှညျ အသညျးရောငျခွငျး
(၃)အရကျကွောငျ့ မဟုတျသော အသညျးအဆီဖုံးခွငျး (NAFLD) တို့ဖွဈပါတယျ။
-ခုခံအားစနဈမှားယှငျးခွငျးကွောငျ့ ဖွဈခွငျး (Primary biliary cirrhosis, primary sclerosing cholangitis, autoimmune hepatitis)
-မြိုးရိုးဗီဇကွောငျ့ ဖွဈတဲ့ ရောဂါအခြို့ (Haemochromatosis, Wilson's disease)
-အသညျးသှေးပွနျကွောပိတျတဲ့ ရောဂါ (Budd Chiari syndrome) နဲ့
-အခြို့သော ဆေးတှေ ဖွဈတဲ့ amiodarone, methotrexate စတာတှကေလညျး အသညျးခွောကျစပေါတယျ။
(၁)အသညျးကွီးခွငျး (အရကျကွောငျ့ ဖွဈတဲ့ အသညျးခွောကျခွငျး နဲ့ မြိုးရိုးဗီဇအရ သံဓါတျတှပေုံရာဖွဈတဲ့ အသညျးခွောကျခွငျး (Haemochromatosis) တှမှော ပိုတှရေ့တတျပါတယျ။ အခွားအကွောငျးရငျးတှကွေောငျ့ဖွဈတဲ့ အသညျးခွောကျခွငျးတှမှောတော့ ပုံမှနျထကျ အသညျးအရှယျအစား သေးသှားမှာပါ)
(၄)ရငျဘတျတဝိုကျနှငျ့ ကိုယျခန်ဓာအပျေါပိုငျးမှာ အနီစကျမြားထှကျခွငျး (Spider telengiectasia)
(၅)အသညျးခွောကျခွငျးရဲ့ နောကျဆကျတှဲဖွဈတဲ့ portal hypertension လက်ခဏာတှဖွေဈတဲ့
-ဗိုကျမကျြနှာပွငျမှာ ခကျြ (umbilicus) ကနေ ဖွာထှကျနတေဲ့ သှေးကွောမြား မွငျရခွငျး (Caput medusae)
-အစာရပွှေနျနှငျ့ အစာအိမျသှေးကွောထုံးတဲ့နရောက သှေးထှကျခွငျး (variceal bleeding) ကွောငျ့ သှေးအနျခွငျး၊ ဝမျးမညျးမညျးသှားခွငျး (Haematamesis and melaena) နဲ့ တှရေ့ခွငျး
(၆)အီစထရိုဂငျြကို အသညျးက မဖကျြနိုငျခွငျးကွောငျ့ အီစထရိုဂငျြမြားတဲ့ လက်ခဏာမြား ဖွဈတဲ့ hair loss(ဂြိုငျးမှေးမရှိခွငျး)၊ လိငျစိတျ လြော့နညျးခွငျး၊ အမြိုးသားတှမှော ရငျသားကွီးခွငျး
(၇)အသညျးက သှေးခဲ factor တှေ ကောငျးကောငျးမထုတျနိုငျတာကွောငျ့ သှေးထှကျလှယျခွငျး
(၈)ညမအိပျခွငျး၊ စကားပွောမမှနျခွငျး၊ သတိလဈခွငျး (အသညျးက မစှနျ့ထုတျနိုငျတဲ့ ammonia အညဈအကွေးတှေ ဦးနှောကျဆီရောကျခွငျး hepatic encephalopathy)
(၈)နုံးခွငျး၊ အားနညျးခွငျး၊ ပြို့အနျခွငျး၊ အစားအသောကျပကျြခွငျး၊ အသညျးနရော ညာဘကျနံရိုးအောကျ မအီမသာဖွဈခွငျး ဒီလို လက်ခဏာတှနေဲ့လညျး တှရေ့တတျတယျ။
အသညျးခွောကျခွငျးရဲ့ နောကျဆကျတှဲ အကြိုးဆကျ complications တှကေတော့-
(၁)အသညျးပကျြစီးခွငျး (Liver failure)
အသညျးလုပျငနျးဆောငျတာ စဈဆေးခွငျး (LFT)၊ နှငျ့ အခွားလိုအပျတဲ့ သှေးစဈဆေးမှုတှေ ဆရာဝနျညှနျကွားမှုအတိုငျး ပွုလုပျဖို့လိုမှာပါ။ အသညျးခွောကျခွငျး အကွောငျးရငျးကို မသိသေးရငျတော့ ဘာအကွောငျးကွောငျ့ အသညျးခွောကျရသလဲဆိုတာ ရှာဖို့လိုမှာပါ။ အာထရာဆောငျးရိုကျခွငျး၊ ရဖေငျြးကို ဖောကျထုတျစဈဆေးခွငျး၊ အသညျးကငျဆာပွောငျး မပွောငျး Alpha fetoprotein (AFP) သှေးစဈခွငျး၊စတာတှေ လုပျဖို့ လိုမှာပါ။
အသညျးခွောကျခွငျးဖွဈ​ပွီးတဲ့ အသညျးဟာ သာမနျပွနျမဖွဈနိုငျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဖွဈစတေဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေို ကုသခွငျး (အသညျးရောငျအသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုး ကုသခွငျး၊ အရကျဖွတျခွငျး) နှငျ့ နောကျဆကျတှဲ အကြိုးဆကျတှကေို ကုဖို့အရေးကွီးပါတယျ။ အသညျးခွောကျတာ စသိတာနဲ့ အစာအိမျမှနျပွောငျးကွညျ့စဈဆေးပွီး အစာအိမျသှေးကွောထုံးတာ ပေါကျတာရှိ မရှိ စဈဆေးပွီး လိုအပျရငျ သှေးကွောခညျြခွငျး ဆေးဖွနျးခွငျး တှေ လုပျဖို့လိုမှာပါ။ သကျဆိုငျရာ အသညျးဆရာဝနျနဲ့ မှနျမှနျပွသပွီး ကုသမှုမှနျမှနျခံယူဖို့လိုပါတယျ။ နောကျဆုံး လိုအပျရငျတော့ အသညျးအစားထိုးကုသမှုအထိ လိုမှာပါ။
အသညျးခွောကျပွီးရငျ ပမျြးမြှ ငါးနှဈ အသကျရှငျနှုနျးဟာ ၅၀ရါခိုငျနှုနျး ဝနျးကငျြပဲရှိပါတယျ။ အသညျးခွောကျတဲ့သူတှအေတှကျ အဆငျ့သတျမှတျခွငျးအတှကျ Child Paugh Grading နဲ့သတျမှတျပါတယျ။ သှေးထဲက အဝါဓါတျ ပမာဏ၊ အသားဓါတျ ပမာဏ၊ သှေးခဲစတေဲ့ သတ်တိ၊ ရဖေငျြးရှိမရှိ၊ သတိကောငျး မကောငျး ဒါတှပေျေါ တှကျခကျြပွီး ရမှတျအလိုကျ Grade A,B, C စသဖွငျ့ သတျမှတျပွီး Grading မွငျ့လေ ဆိုးလေ သတျမှတျပါတယျ။ အကောငျးဆုံးကတော့ အသညျးခွောကျခွငျးဖွဈစတေဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေို ကာကှယျခွငျးဖွငျ့ အသညျးခွောကျခွငျးကိူ ကွိုတငျကာကှယျခွငျးပါ။
အသည်းခြောက်တာကို ဆေးပညာ အခေါ်အဝေါ်အရ Cirrhosis of liver လို့ခေါ်ပါတယ်။ အသည်းခြောက်တာက ရုတ်ချည်းဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ တဖြည်းဖြည်းချင်း နှစ်နဲ့ချီ ဖြစ်တာပါ။ အသည်းပုံမှန်ဆဲလ်တွေ နေရာမှာ fibrous tissues လို့ခေါ်တဲ့ အမျှင်တွေ အစားထိုးလာကာ နောက်ဆုံးမှာ အသည်းရဲ့ မူလဖွဲ့စည်းပုံ ပျောက်သွားပြီး nodules လို့ခေါ်တဲ့ အလုံးတွေ ဖြစ်လာတာကို ခေါ်တာပါ။ ဒီအမျှင်တွေက အသည်းဆဲလ်တွေကြားက သွေးစီးဆင်းမှုကိုပါ ပိတ်ဆို့စေလို့ အသည်းဆီလာတဲ့ သွေးပြန်ကြောအဖွဲ့အစည်းမှာ သွေးပေါင်တက်ခြင်း (Portal Hypertension) ဆိုတဲ့ အခြေအနေကိုလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကတော့ အသည်းခြောက်တဲ့အခါ တွေ့ရတဲ့ ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းပါ။
ဘယ်အကြောင်းတွေက အသည်းခြောက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသလဲ?
(၂)အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီပိုး စီပိုးကြောင့် နာတာရှည် အသည်းရောင်ခြင်း
(၃)အရက်ကြောင့် မဟုတ်သော အသည်းအဆီဖုံးခြင်း (NAFLD) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
-ခုခံအားစနစ်မှားယွင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ခြင်း (Primary biliary cirrhosis, primary sclerosing cholangitis, autoimmune hepatitis)
-မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါအချို့ (Haemochromatosis, Wilson's disease)
-အသည်းသွေးပြန်ကြောပိတ်တဲ့ ရောဂါ (Budd Chiari syndrome) နဲ့
-အချို့သော ဆေးတွေ ဖြစ်တဲ့ amiodarone, methotrexate စတာတွေကလည်း အသည်းခြောက်စေပါတယ်။
(၁)အသည်းကြီးခြင်း (အရက်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အသည်းခြောက်ခြင်း နဲ့ မျိုးရိုးဗီဇအရ သံဓါတ်တွေပုံရာဖြစ်တဲ့ အသည်းခြောက်ခြင်း (Haemochromatosis) တွေမှာ ပိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အခြားအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အသည်းခြောက်ခြင်းတွေမှာတော့ ပုံမှန်ထက် အသည်းအရွယ်အစား သေးသွားမှာပါ)
(၄)ရင်ဘတ်တဝိုက်နှင့် ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်ပိုင်းမှာ အနီစက်များထွက်ခြင်း (Spider telengiectasia)
(၅)အသည်းခြောက်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ portal hypertension လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့
-ဗိုက်မျက်နှာပြင်မှာ ချက် (umbilicus) ကနေ ဖြာထွက်နေတဲ့ သွေးကြောများ မြင်ရခြင်း (Caput medusae)
-အစာရေပြွန်နှင့် အစာအိမ်သွေးကြောထုံးတဲ့နေရာက သွေးထွက်ခြင်း (variceal bleeding) ကြောင့် သွေးအန်ခြင်း၊ ဝမ်းမည်းမည်းသွားခြင်း (Haematamesis and melaena) နဲ့ တွေ့ရခြင်း
(၆)အီစထရိုဂျင်ကို အသည်းက မဖျက်နိုင်ခြင်းကြောင့် အီစထရိုဂျင်များတဲ့ လက္ခဏာများ ဖြစ်တဲ့ hair loss(ဂျိုင်းမွှေးမရှိခြင်း)၊ လိင်စိတ် လျော့နည်းခြင်း၊ အမျိုးသားတွေမှာ ရင်သားကြီးခြင်း
(၇)အသည်းက သွေးခဲ factor တွေ ကောင်းကောင်းမထုတ်နိုင်တာကြောင့် သွေးထွက်လွယ်ခြင်း
(၈)ညမအိပ်ခြင်း၊ စကားပြောမမှန်ခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်း (အသည်းက မစွန့်ထုတ်နိုင်တဲ့ ammonia အညစ်အကြေးတွေ ဦးနှောက်ဆီရောက်ခြင်း hepatic encephalopathy)
(၈)နုံးခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ အသည်းနေရာ ညာဘက်နံရိုးအောက် မအီမသာဖြစ်ခြင်း ဒီလို လက္ခဏာတွေနဲ့လည်း တွေ့ရတတ်တယ်။
အသည်းခြောက်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက် complications တွေကတော့-
(၁)အသည်းပျက်စီးခြင်း (Liver failure)
အသည်းလုပ်ငန်းဆောင်တာ စစ်ဆေးခြင်း (LFT)၊ နှင့် အခြားလိုအပ်တဲ့ သွေးစစ်ဆေးမှုတွေ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှုအတိုင်း ပြုလုပ်ဖို့လိုမှာပါ။ အသည်းခြောက်ခြင်း အကြောင်းရင်းကို မသိသေးရင်တော့ ဘာအကြောင်းကြောင့် အသည်းခြောက်ရသလဲဆိုတာ ရှာဖို့လိုမှာပါ။ အာထရာဆောင်းရိုက်ခြင်း၊ ရေဖျင်းကို ဖောက်ထုတ်စစ်ဆေးခြင်း၊ အသည်းကင်ဆာပြောင်း မပြောင်း Alpha fetoprotein (AFP) သွေးစစ်ခြင်း၊စတာတွေ လုပ်ဖို့ လိုမှာပါ။
အသည်းခြောက်ခြင်းဖြစ်​ပြီးတဲ့ အသည်းဟာ သာမန်ပြန်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ကုသခြင်း (အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုး ကုသခြင်း၊ အရက်ဖြတ်ခြင်း) နှင့် နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်တွေကို ကုဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အသည်းခြောက်တာ စသိတာနဲ့ အစာအိမ်မှန်ပြောင်းကြည့်စစ်ဆေးပြီး အစာအိမ်သွေးကြောထုံးတာ ပေါက်တာရှိ မရှိ စစ်ဆေးပြီး လိုအပ်ရင် သွေးကြောချည်ခြင်း ဆေးဖြန်းခြင်း တွေ လုပ်ဖို့လိုမှာပါ။ သက်ဆိုင်ရာ အသည်းဆရာဝန်နဲ့ မှန်မှန်ပြသပြီး ကုသမှုမှန်မှန်ခံယူဖို့လိုပါတယ်။ နောက်ဆုံး လိုအပ်ရင်တော့ အသည်းအစားထိုးကုသမှုအထိ လိုမှာပါ။
အသည်းခြောက်ပြီးရင် ပျမ်းမျှ ငါးနှစ် အသက်ရှင်နှုန်းဟာ ၅၀ရါခိုင်နှုန်း ဝန်းကျင်ပဲရှိပါတယ်။ အသည်းခြောက်တဲ့သူတွေအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအတွက် Child Paugh Grading နဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်။ သွေးထဲက အဝါဓါတ် ပမာဏ၊ အသားဓါတ် ပမာဏ၊ သွေးခဲစေတဲ့ သတ္တိ၊ ရေဖျင်းရှိမရှိ၊ သတိကောင်း မကောင်း ဒါတွေပေါ် တွက်ချက်ပြီး ရမှတ်အလိုက် Grade A,B, C စသဖြင့် သတ်မှတ်ပြီး Grading မြင့်လေ ဆိုးလေ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ အသည်းခြောက်ခြင်းဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် အသည်းခြောက်ခြင်းကိူ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းပါ။
【 အလှအပနှငျ့ ကနျြးမာရေး 】သားအိမျပွငျပ သန်ဓတေညျခွငျး (Ectopic pregnancy)